Nagarik Shukrabar - फिट कसरी हुने ?
फिट कसरी हुने ?
मङ्गलबार, २० असार २०७४, ०१ : २४ | शुक्रवार , Kathmandu
फेसननेबल एवं आकर्षक देखिन राम्रो लुगा लगाएर मात्र हुँदैन त्यसका लागि सबैभन्दा जरुरी फिटनेस हो । शरीर फिट भएमा जुनै आउटफिटमा पनि स्मार्ट देखिन्छ । जुनै पहिरनमा पनि आकर्षक देखिने चाहना हरेक व्यक्तिमा हुन्छ । फिट देखिन र रहनका लागि केही टिप्स यस प्रकार छन्ः
स्लिम ट्रिम हुनका लागि खाना खान छोड्नु पर्छ भन्ने छैन । खाना खाएर पनि आफ्नो शरीरलाई फिट राख्न सकिन्छ तर यसका लागि केही नियम भने अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
खानाको बीचमा लामो ग्याप हुन नदिने : यदि तपाईं छिनछिनमा नै केही खाइरहनु हुन्छ भने दिमागमा भोक लाग्ने कुरा आउँदैन । जसले गर्दा त्यहीअनुसार शरीर मेन्टन हुन्छ ।
बिस्तारै बिस्तारै खाने : तपाईं बिस्तारै स्वाद लिएर खाना खानु हुन्छ भने पेट भरिएको थाहा हुन्छ तर छिटोछिटो खाना खाएमा पेट भरेको थाहा नहुने भएकाले झन् धेरै खाना खाइन्छ । धेरै खाना खाएपछि मोटोपन बढ्नु स्वाभाविक हो ।
पर्याप्त निद्रा पुर्याउने : निद्रा कम पर्नु वा नलाग्नु वा लाग्न नदिनु पनि वजन बढ्नुको एउटा कारण हो । निन्द्रा कम भएमा तनाव महसुस हुने हुन्छ । तनाव भएको अवस्थामा हार्मोनले शरीरमा अत्यधिक पानी बढाउने हुन्छ । जसले गर्दा वजन बढ्छ । यति मात्र नभई निद्रा राम्ररी पुगेन भने सही वर्कआउट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।
अल्कोहलदेखि टाढा रहने : फिट रहन चाहनु हुन्छ भने अल्कोहल (मद्यपान)देखि टाढै बसेको राम्रो हुन्छ । अल्कोहलको सेवनले बढी मोटोपन बढ्ने हुन्छ । मोटोपन हुनु स्वास्थ्यको हिसाबले पनि राम्रो मानिदैन ।
घरको खाना खाने : फिट रहनका लागि स्वस्थ खाना खानु आवश्यक हुन्छ । घरको खाना स्वच्छ एवं स्वस्थकर हुने भएकाले बाहिरका खानाको तुलनामा घरको खाना नै खानु नै राम्रो हो । घरको खानामा आफूले चाहेको मात्रामा तेल राख्न सकिन्छ । होटलको खानामा क्यालोरीको मात्रा बढी हुने हुन्छ । धेरै चिल्लो खानाले रोग निम्त्याउनुका साथै मोटाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।
भेज खाना खाने : यो सत्य हो नन्भेज खानामा पोषक तत्व बढी हुन्छ तर यस सँगसँगै बोसोको मात्रा पनि बढी हुने भएकाले यसका विपरीत सागसब्जी खानाले वजन चाँडै घट्ने हुन्छ । त्यसैले आफ्नो खान्कीमा सबै किसिमको गेडागुडी, दाल एवं हरियो सागसब्जी बढी राख्न आवश्यक छ ।
खाना सही मात्रामा खाने : डायटिङ गर्नुको साटो तपाईं आफूले खाइरहेको खाना कम गर्दा वेश हुन्छ । त्यसका साथै सानो प्लेटमा खाना कम खाने भएकाले ठूलो प्लेटको साटो सानो प्लेटमा खाना खाने ।
सानो–सानो काम गर्नु पनि फाइदाजनक :घरको सानो–सानो काम गरेर पनि आफ्नो एक्स्ट्रा क्यालोरी कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि घरको सरसफाई गर्ने र जगिङ गर्ने । अफिसमा लिफ्टको साटो सिँढी प्रयोग गर्ने आदि ।
फिटनेसका लागि कस्तो खाना खाने ?
सलाद : तपाईं सलाद खान रुचाउनु हुन्छ भने त्यसमा हरियो सागसब्जी मिसाएर अझ हेल्दी बनाउनुहोस् । सलादमा प्रोटिन पाइने खान्की, जस्तैः माछा, चिकन मिलाउन सक्नु हुन्छ । त्यसमा दही तथा ओलिभ आयल प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।
अण्डा : अण्डा खानु पनि वजन घटाउन सहायक बन्न सक्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । क्यालोरी हेरीकन खान्की लिनेहरुका लागि यो निकै राम्रो तरिका हो । अण्डा नखाने महिलाहरुको तुलनामा खानेहरुको वजन कम हुन्छ । अण्डामा भएको प्रोटिनले पेट धेरैबेरसम्म भरिइरहने हुन्छ ।
दाल : यसमा प्रोटिन एवं फाइबरको धेरै मात्रा हुने भएकाले पेट घटाउन चाहनेहरुले खाने अथवा झोल पिउने गर्नुपर्छ ।
खोर्सानी : खोर्सानीमा भएको ‘केपसाइसिन’को प्रभाव शरीरमा लगभग २० मिनटका लागि बढी केलोरी प्रयोग हुने हुन्छ । साथै पिरो चिज बिस्तारै खानाले पेट पनि चाँडै भरिन्छ । जसले गर्दा भोक लाग्दैन ।
स्याउ : खाना खानुभन्दा अघि एउटा स्याउ खाने । यसो गर्नाले कार्बोहाइड्रेडयुक्त खाना धेरै खान सकिँदैन किनभने स्याउमा भएको फाइबरले चाँडै नै पेट भरिएको महसुस हुन्छ ।
स्रिट्स फ्रुट्स :सुन्तला, मौसमजस्ता फलहरुमा सोलुबल फाइबरको मात्रा बढी हुने भएकाले यसको सेवनले पाचन क्रिया (पचाउने शक्ति) सुस्त बनाउने हुन्छ र पेट धेरैबेरसम्म भरिने हुन्छ । खाना कम खानु पनि मोटोपन रोक्नु सहायक हुन्छ ।
ओट :ओट फ्लेक्स या इन्स्टन्ट ओटमिलले चाँडै नै सन्तोष मिल्ने भएकाले पेट भरिएको महसुस हुन्छ किनभने अन्य कार्बोहाइडे«डभन्दा जस्तो ओट चाँडै नपच्ने हुन्छ । यसले ब्लड सुगरमा पनि सुस्त प्रभाव पार्छ ।
लो फ्याट डेरी प्रोडक्ट : कम फ्याट भएको उपलब्ध हुने दही एवं डेरी प्रोडक्ट आफ्नो डाइटका लागि प्रयोग गर्नुहोस् । यस्तो खानाले शरीरको वजन चाँडो बढ्दैन ।
ड्राई फ्रुट्स : ड्राई फ्रुट्समा एसिडको मात्रा बढी हुन्छ । यसले कोलेस्ट्रोल कम गर्न सहायक भूमिका खेल्छ । जसरी सन्तुलित खानामा प्रोटिन एवं कार्बोहाइड्रेडको मात्रा आवश्यक हुन्छ, त्यसरी नै केही फ्याट पनि शरीरका लागि आवश्यक हुन्छ । ड्राई फ्रुट्सले सो फ्याटको आवश्यकता पूरा गर्छ । शरीरको सन्तुलित आहारमा ड्राई फ्रुट्सको आफ्नै महत्व छ ।
फिटनेस हुनेहरुको पहिचान
फिटनेसको चाहना हुनेहरु जहिले पनि आफ्नो वजनमा ध्यान दिने गर्छन् । यसो गर्नाले अचानक मोटो भएको महसुस पनि हुँदैन । यस्तो चाहना राख्नेहरु नियमित रुपमा एक्सरसाइज गर्ने गर्छन् । उनीहरु खानाको लागि मरिहत्ते गर्दैनन् र कुनै समस्या पर्दा पनि चाँडै अत्तालिदैनन् । पेट भरिएपछि खाना खान रुचाउँदैनन् । कसैले जबजस्ती गर्दा पनि खाँदैनन् । प्लेटमा पस्केको सबै खाना खानै पर्छ भन्ने जरुरी सम्झदैनन् । फिट हुनेहरु चाँडै डाइटिङको बारेमा सोच्दैनन् । जो व्यक्ति दुब्लो पातलो छ, उसको खानपानको स्तर ओबरवेटहरुले खानेभन्दा पनि धेरै नै राम्रो हुन्छ । उनीहरु धेरैजसो सब्जी, फलफूल एव रेशायुक्त पदार्थ खानुका साथै भरपूर मात्रामा पानी पिउने गर्छन् । फिट रहनेहरु नियमित रुपले खाजा खाने गर्छन् ।
फिट रहनुको फाइदा
फिट रहनु पनि फाइदाजनक छ । फिट रहेमा गर्जियस लुक पाउन सकिन्छ किनभने फिट शरीरमा सर्ट स्लिभलेस हरेक किसिमका आउटफिटहरु पर्फेक्ट देखिन्छन् । त्यसैले फिट शरीर हुनेहरु सधैँ आकर्षक देखिन्छन् । अर्को फाइदा, फ्रेस महसुस गर्नु फिट रहनु भनेको नै वजन कम हुनु एवं नियन्त्रित रहनु हो । शरीर फिट रहेको अवस्थामा हामीमा आत्मविश्वास बढ्नुका साथै हामी आफूलाई हलुका, फ्रेश एवं स्वस्थ महसुस गर्न सक्छौँ ।